Goatemalà: Nampodiana Ny Filoham-pirenena Teo Aloha Portillo Rehefa Avy Nandositra Tany Meksika · Global Voices teny Malagasy
Goatemalà: Nampodiana Ny Filoham-pirenena Teo Aloha Portillo Rehefa Avy Nandositra Tany Meksika
Voadika ny 25 Mey 2018 7:10 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Español, বাংলা, srpski, 繁體中文, 简体中文, English
Atsaharo ny kolikoly, an'i Kenny Miller
Meksika, nampodiana tany amin'ny fireneny ny Filohan'i Goatemalà Alfonso Portillo teo aloha [amin'ny fiteny anglisy], izay tsy maintsy hiatrika fitsaràna mikasika ireo kolikoly sy ireo fandikandalàna nataony .
Manoratra ny blaogera Tigre 007 [amin'ny fiteny espaniôla] fa mifety ny nahasamborana azy i Goatemalà, izay mety hampihena ny tahan'ny fanaovana kolikoly nozakain'ny firenena. Vaovao tsara ho an'ireo mponina ao Goatemalà, satria saika adino ny iray tamin'ireo fanodikodinana volam-bahoaka goavana indrindra … saingy tsy izany intsony ankehitriny. Ho tsaraina ny filohan'ny repoblika teo aloha, ao anatin'ny firenena iray izay tratry ny kolikoly goavana.
Na izany aza, araka izay voalazan'ny blaogy Megachapines, maro ireo mponina ao Goatemalà no mbola mankasitraka ny Zacapaneco (anaram-bositr'i Portillo) [amin'ny fiteny espanola], mino izy ireo fa valifaty ara-politika io fa tsy fitsaràna marina. Ary vokatr'izay, ora vitsy taorian'ny fanambaràna ny fampodiana azy, nipatitaka ny fanantenana hisianà fitsaràna mangarahara, tao anatin'ny fahatsapàna ankapobeny fa fandrebirebena ataon'ny media fotsiny no misy. Teo amin'ny Carpe Diem, manoratra i Luis Figeroa [amin'ny fiteny espaniôla] hoe: “Hosoka”:
Más arreglada que la lucha libre, o que las bancas de una iglesia, estuvo la entrega de Alfonso Portillo. ¿Va usted a creer que en la Torre de Tribunales había gente que, espontáneamente, gritaba ¡Zacapa te apoya!?
Tena hosoka kokoa noho ny lalao catch na ireo dabilio ao ampiangonana ny famerenana an'i Alfonso Portilla. Hino an'io ve ianareo? Teo anoloan'ny tribonaly, nisy ireo olona nihiakiaka tampoka hoe “manohana anao Zacapa”!?